Fanaterana fehezam-boninkazo - maimaim-poana hatrany any Moskoa
Aorian'ny fametrahana ny baiko amin'ny tranokala, ny vaovao momba izany dia mandeha any amin'ny serivisy fanaterana ny outlet na ny florist manokana izay nofidinao. Azonao atao ny manara-maso amin'ny dingana manao ahoana no ampiasain'ny baiko ny angon-drakitra ao amin'ny kaontinao amin'ny tranokala.
Maimaimpoana ny fandefasana any Mosko (ao anatin'ny faritry ny tanàna). Maimaimpoana ihany koa ny fandefasana raha tsy mihoatra ny rond point. Raha tsy any Moskoa no mahazo ilay fehezam-boninkazo, ny vidin'ny serivisy dia apetraky ny fivarotana voninkazo na mivantana avy amin'ny mpamorona voninkazo ary isaina ho azy arakaraka ny isan'ny kilometatra avy amin'ny boriborintany voalaza ao amin'ny endrika filaminana Hiankina amin'ny halaviran'ny tsirairay avy izany.
Ny fotoana hanaterana ny fehezam-boninkazo aminao dia miankina amin'ny fahasarotan'ny asa sy ny fivezivezena. Ny famaritana ireo entana ao amin'ilay tranokala dia manondro hafiriana haharitra amin'ny fanaterana ity fehezam-boninkazo ity any Moskoa. Aorian'ny fametrahana ny kaontinao dia hahazo SMS milaza ianao fa nekena ny baiko. Ary avy eo - nalefa ny baiko, ary afaka jerenao ihany koa ny sarin'ilay fehezam-boninkazo natolotra sy ny sarin'ilay mpandray, raha tsy nety naka sary niaraka tamin'ny fehezam-boninkazo ilay mpandefa adiresy.
Fanamarihana momba ny salon
Sambatra tompon'ny fehezam-boninkazo